Soosaarka Shiinaha ee Soosaarida Saamaynta Idler iyo Warshad | Joyroll
Caawinta saamayntu waxay ilaalisaa suunka adoo dhuuqaya saamaynta goobaha dhibcaha iyo wareejinta. Waxaa lagu heli karaa xaglo 20, 35 iyo 45 darajo, xagal kasta oo kale ayaa sidoo kale loo soo saaraa sida loogu talagalay naqshadeynta iyo sawirada macaamiisha.
Saameyn la'aanka ilaali suunka adoo dhuuqaya saamaynta ay ku leeyihiin rarka iyo wareejinta. Waxaa lagu heli karaa xaglo 20, 35 iyo 45 darajo, xagal kasta oo kale ayaa sidoo kale loo soo saaray iyada oo loo eegayo naqshadeynta macaamiisha iyo sawirada nacasnimada saamaynta. Eropean DIN standard, America CEMA standard, Japan JIS standard ayaa laga heli karaa keydka.